Windows, Linux နှင့် macOS များအတွက် bootable flash drive တစ်ခုဖန်တီးရန်ပရိုဂရမ် ၆ ခု Emulator.online ▷🥇
bootable flash drive တစ်ခုဖန်တီးရန်ပရိုဂရမ်များသည် USB flash drive ကို bootable disk အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူစေရန်ရှာသည်။ ၎င်းစက်များသည် CD များနှင့် DVD များကိုအစားထိုးဝင်ရောက်နေသည်၊ ပျက်ကွက်သောစနစ်မှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန်သို့မဟုတ်ခြစ်ရာကနေ install လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါစာရင်းသည် Windows, macOS နှင့် Linux ဖြန့်ဝေမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုစုစည်းထားသည်။ ထွက်ခွာသည်!
ပြန်ဖွင့် / ရုဖု
ပေါ်တူဂီဘာသာစကားဖြင့်ရရှိနိုင်သည့် Rufus သည် executable file တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုရန်သင်၏ PC တွင်ပင်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီ application က ISO ဖိုင်တစ်ခုမှ installation media ကိုဖန်တီးရန် bootable flash drive တစ်ခုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
BIOS, firmware (သို့) ပရိုဂရမ်တွေကိုအဆင့်နိမ့်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ update လုပ်ဖို့နည်းလမ်းတခုလည်းလုပ်နိုင်တယ်။ Application တွင်မကောင်းသောကဏ္forများအတွက် flash drive ကိုစစ်ဆေးရန်လည်းရွေးချယ်စရာရှိသည်။ developer များက software သည်အဓိကပြိုင်ဘက်များထက်နှစ်ဆပိုမြန်သည်ဟုအာမခံသည်။
ရုဖု (အခမဲ့) - Windows Linux
၂။ Universal USB Installer
Universal USB Installer သည်၎င်း၏ရိုးရှင်းလွယ်ကူမှုအတွက်ထင်ရှားသည်။ operating system, ISO file နှင့် USB stick ကိုသာရွေးပါ။ ထို့နောက်သွားပါ ဖန်တီး နောက် ... ပြီးတော့။ ဒီပရိုဂရမ်ကို system installation အတွက်သာမကပဲ recovery drive, security အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဖ်ဝဲက Linux ဖြန့်ချိမှုများတွင်မြဲမြံသောသိုလှောင်မှုနှင့်အတူ boot စက်များဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီ feature က system settings နဲ့ file backup တွေကို access လုပ်တယ်။
အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်သော ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းအတွက်သင်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက၊ Flash drive ကို NTFS အဖြစ်ပုံစံချပြီး 20 GB နေရာလွတ်ရှိသည်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်၎င်းကိရိယာကို Fat16 သို့မဟုတ် Fat32 အဖြစ်လည်း format ချနိုင်သည်။
Universal USB Installer (အခမဲ့) - Windows Linux
Universal USB Installer ကဲ့သို့ပင် developer မှ YUMI သည် multiboot installer အဖြစ်ထင်ရှားသည်။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ၎င်းသည် pendrive ပေါ်တွင် operating systems များ၊ firmware များ၊ antivirus unit များနှင့်ကင်မရာများကိုအခြားအရင်းအမြစ်များတွင်သိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
တစ်ခုတည်းသောအဟန့်အတားတစ်ခုမှာကိရိယာ၏ဤအရာအားလုံးကိုလက်ခံနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ pendrive တစ်ခုဖန်တီးရန်လည်းဤ application သည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်၎င်းကို Fat16, Fat32 သို့မဟုတ် NTFS တွင် format ချရမည်။
YUMI (အခမဲ့) - Windows Linux | Mac OS
4. Windows ကို USB / DVD ကို Tool ကို
ပြန်ဖွင့် / Softonic
Windows USB / DVD Tool သည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏တရားဝင်ကိရိယာဖြစ်ပြီး Windows7(သို့) ၈ ကိုတပ်ဆင်ရန် bootable flash drive တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်က Windows ဖိုင်တွဲများကိုပေါင်းစပ်ပေးသော ISO ဖိုင်မိတ္တူကူးရန်ခွင့်ပြုသည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးမီဒီယာ drive ကို USB port ထဲသို့ထည့်ကာ ISO ကိုရွေး။ ကလစ်နှိပ်ပါ တလျှောက်ရွှေ့ပါ။ ထို့နောက်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ သင်၏ boot drive တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများကိုသင်ရှာမနေပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Windows ကို USB / DVD ကို Tool ကို (အခမဲ့) - Windows7နှင့် ၈.၁
ပြန်ဖွင့် / Balena
Etcher သည်အမျိုးမျိုးသောစနစ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော်လည်းအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့်၎င်းသည် Windows, macOS သို့မဟုတ် Linux ဖြန့်ချိမှုများအတွက် flash drive ကို bootable media တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လယ်ကွင်းတွင်အတွေ့အကြုံနည်းသောသူများအတွက်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Etcher (အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်လစာရသောဗားရှင်းလည်းရှိသည်): Windows | macOS | Linux
ပြန်ဖွင့် / Softpedia
WinSetupFromUSB သည် XP မှ Windows 10 အထိ Windows မည်သည့်ဗားရှင်းမဆို multi-boot flash drives များကိုဖန်တီးရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းအမည်သည် Microsoft system ပေါ်တွင်အဓိကထားသော်လည်း program သည် Linux အမျိုးအစားအချို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဗ်ဝဲ drives မ်ား၊ မတူညီသောထုတ်လုပ်သူများထံမှပြန်လည်သိမ်းဆည်းသည့်ဒစ်စ်များသိမ်းဆည်းခြင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသော်လည်း၎င်းသည်ထိုးထွင်းသိမြင်လွယ်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်ရှိခြင်းအတွက်ထင်ရှားသည်။
WinSetupFromUSB (အခမဲ့) - Windows Linux
bootable flash drive ကဘာလဲ။
ယခင်က CD, DVD-ROMs နှင့် floppy disk များကိုတောင် bootable media အဖြစ်သုံးလေ့ရှိသည်။ ဒီနေ့ခေတ်ကွန်ပျူတာတော်တော်များများကဒီမီဒီယာကိုမထောက်ပံ့တော့တဲ့အတွက် USB flash drive နဲ့ SD ကဒ်တွေကအစားထိုးတွေနဲ့နေရာရလာကြပြီ။
ပိုမိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့်အပြင်၊ ပိုမြန်သည်။ ၎င်းကို bootable လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကို external OS installer တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ boot disk ရှိ installation ပရိုဂရမ်သည် PC ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားပြီးလက်ရှိစနစ်ကို overwrite လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကို scratch မှတပ်ဆင်နိုင်သည်။
၎င်းစက်ကိုစနစ်ချို့ယွင်းချက်များကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့်ပြန်လည်ဆယ်တင်သည့် disk တစ်ခုအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်စနစ်၏အလွန်ပေါ့ပါးသောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုအရန်ကူးရန်အတွက်လုံလောက်သော drive နှင့်အရင်းအမြစ်များရှိသည်။
CD, DVD နှင့် Blu-Ray ကိုလောင်ကျွမ်းရန်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ
Google Chrome အော့ဖ်လိုင်းကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုတ်လုပ်မလဲ
အကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး PC အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်